To: लोकमानसँग नेपाली प्रेस किन डराउने?
अमित ढकाल - लोकतन्त्रले कुनै पनि समाजमा विकासको, समृद्धिको ग्यारेन्टी गर्दैन। कुनै पनि समस्या समाधानको ग्यारेन्टी गर्दैन। तर, एउटा कुराको सदैव ग्यारेन्टी गर्छ र गर्नुपर्छ, त्यो हो कुनै पनि विषयमा संवादको ग्यारेन्टी। लोकमानको विषयमा भने तपाईंहरू कुरै नगर्ने? सुतुरमुर्गले झैं बालुवामा टाउको लुकाइराख्ने? लोकमानले संविधानको चरम उल्लंघन गरेर अघि बढ्दा त्यसको उपचार खोज्ने संविधानले व्यवस्था गरेको एउटा मात्र थलो संसदमा किन छलफल नहुने? ...
आनन्दप्रसाद ढुंगाना - हाम्रो पार्टी पञ्चायतविरुद्ध लडेको पार्टी हो। पञ्चायतविरुद्धको संघर्षमा बलिदान गरेर आएका छौं। अनि कसरी पञ्चायती संरचना र सोचलाई निरन्तरता दिउँला त? इतिहास बुझेर मात्रै तर्क गर्नुपर्छ।
नारायण वाग्ले - दक्षिण एसियामा भारतले कसैलाई केही दिन जान्दैन। ऊ कसैलाई केही दिन चाहँदैन। अरूबाट लिन मात्र चाहन्छ। किनभने भारत भनेको त्यो संस्थापन हो जसमा ब्राह्मणको राज छ। ...त्यो साँझ पनि माथि कश्मिरमा कफ्र्यु जारी थियो। भारतको भित्रभित्रै पाकिस्तानसँग तनावका लक्षण देखिँदै थिए। मोदीले ‘क्षेत्रीयतावाद’ भन्ने गरे पनि सार्कको अस्तित्वमै आशंका चुलिनु नै थियो। (विस्तृतमा)
तुलानारायण साह - तीन दलका ठूला नेताले हचुवाको भरमा यो निर्णय गर्नुभएको छ। आयोगको काम एउटा तहमा पुगेको बेला त्यसलाई पनि ख्यालै नगरी तीन दलले यो निर्णय आएको छ। यसले आयोगलाई मर्नु न बाँच्नु बनाएको छ। आयोगले अहिलेसम्म गरेको परिश्रम खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको छ। पहिलो संविधानसभा गठन भएदेखि नै विज्ञहरू र यस क्षेत्रका सरोकारवालाले गरिरहेको अध्ययन र बसहको पनि धज्जी उडाएको छ। त्यसैले, आफूलाई ब्रम्हा, विष्णु, महेश्वर ठान्ने तीन दलले द्वन्द्व बढाउने काम गरेका छन्।
प्रा. पिताम्बर शर्मा - ध्यान नपुर्‍याई गरिएको स्थानीय तहको पुनसंरचनाले हामीलाई प्रतिनिधित्वको पुरानै परीपाटीमा लैजान्छ। यो त संघीयताको नाटकमात्रै हुन्छ। बुझ्न नसकिने कुरा त के भने राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणको नारा दिएर जनयुद्ध गर्नेहरू नै यसमा मतियार छन्।
प्रत्यूष वन्त - जंगबहादुरका भाइ रणोदीपका पालामा भर्ती अभियानमा सहयोग गर्ने भनिए पनि उनले आफ्ना कर्मचारीलाई सहयोग नगर भन्ने र अपाङ्गता भएका मानिसलाई भर्तीका लागि पठाइदिने जस्ता कार्य गरे। शमशेर खलक सत्तामा आएपछि भने द्विपक्षीय सम्बन्ध र भर्ती प्रक्रियामा केही परिवर्तन आयो। अंग्रेजले नयाँ शमशेरहरूको सत्तालाई समर्थन गर्ने र नेपालले भर्ती गर्न दिने भन्ने किसिमको समझदारी भएको देखिन्छ।
प्रदीप गिरि - सुवर्णजीलाई लेख्नुभएको चिठी र भोलासितको कुराकानीले एउटा कुरो प्रस्ट पारेको छ ः निर्वासित बिपीले विभक्त मानसिकताका साथ क्रान्तिको कुरा गर्नुभएको थियो। तर एउटा सिङ्गो पुस्ता त्यसको भूमरीमा अल्मलियो। इतिहासकारले ढिलोचाँडो त्यसको गहन अध्ययन गर्नेछन्। Comments
जीवन क्षेत्री - पैसा कमाउन हैन सेवाका लागि डाक्टर बन्नुपर्छ भन्ने डा रिजालको टोलीले आँफु जस्ता मेडिकल कलेजका संचालकहरुको स्वार्थ पुरा हुने गरी लाजै नमानी शुल्क झण्डै दोब्बर बनाउने सुझावसहित प्रतिवेदन बुझायो । सम्भवतः हाम्रो तदारुक सरकारले यही शैक्षिक सत्रदेखि त्यसलाई लागू गर्नेछ। Comments
नारायण वाग्ले - भारत जोडले आर्थिक शक्ति राष्ट्र बन्ने धुनमा अन्तर्राष्ट्रिय पखेँटा खियाउँदैछ, आन्तरिक रूपमा भने वेचैनी र विरोधाभाषहरू पनि उत्तिकै बढाउँदैछ। भारतले कस्तो विकास कसरी गर्दै जान्छ भन्नेले हामी छरछिमेक सोझै प्रभावित हुने नै छौँ। हुँदै गएकै छौँ। आकाशमा बादलहरू बदलिइसकेका छन्। जमिनमा बहिष्करण बढिरहेको छ।
प्रा. चैतन्य मिश्र - हामीलाई थाहा छ - नेपालमा असमानता छ, जग्गा कसैको धेरै र कसैको थोरै छ। तर, पनि नेपाल ८०-९० प्रतिशत मानिससँग जग्गाजमिन भएको मुलुक हो। यस्ता मुलुक संसारमा विरलै छन्। जग्गाले हरेक परिवारलाई आफ्नै खुट्टामा उभिने तागत दिन्छ। त्यो लोकतन्त्रका लागि अपरिहार्य तत्व हो।
दासत्व भएको ठाउँमा लोकतन्त्र आउन सक्दैन। किनभने त्यहाँ स्रोतसाधन एउटाले कब्जा गरेको हुन्छ, अर्कोले श्रम मात्रै दिन्छ। थोरै बाँकी रहेका कमैया र हलियाजस्ता प्रथाबाहेक हामीकहाँ यस्तो नभएको धेरै भयो।
प्रचण्डजी, लोकमानलाई निर्दोष साबित हुने मौका किन नदिने?
जीवन क्षेत्री - भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न रातदिन खटेको मानिसलाई आफैं भ्रष्ट र माफिया भएको आरोप लाग्दा कस्तो महसुस होला? आफूमाथि लागेका आरोपका कारण संस्थाकै भूमिका र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्दा कति चित्त दुख्छ होला? आरोप मात्र हैन, तिनका प्रमाण भनेरै विभिन्न कागजातहरु मिडियामा आउँदा कति ग्लानी र हीनताबोध हुन्छ होला?
प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं र सरकारले योग्य ठाने मलाई सहयोग गरे हुन्छ
सुदन अधिकारी - घरको एक मात्र भरोसा रहनुभएका बुबालाई बेपत्ता बनाएपछि हाम्रा लागि मीठो खाने दिन कहिल्यै आएन। एकदिन छिमेकीको घरमा खसी काटेका रहेछन्। दाइ पनि मासु लिन भनेर जानुभएछ। तर, पैसा तिर्न सक्दैनौं भनेर खाली हात पठाइदिएछन्। हामीले केही गर्न र केही भन्न सक्ने अवस्थै थिएन। हामी त बेसहारा थियौं। गरिब थियौं। हाम्रो पक्षमा बोलिदिने कोही थिएन।
सेतोपाटीलाई तपाईंको साथ
'स्वैच्छिक शुल्क योजना' को प्राविधिक तयारी लगभग पूरा भएको छ। अब हामी यो योजनाप्रति इच्छुक पाठकहरुको प्रारम्भिक तथ्यांक संकलन गर्ने र 'स्वैच्छिक शुल्क योजना' को प्राविधिक परीक्षण गर्ने अन्तिम प्रक्रियामा आइपुगेका छौं। यो योजनाप्रति इच्छुक आदरणीय पाठकहरुले हामीलाई आफ्नो इमेल वा फोन नम्बर पठाएर प्रारम्भिक 'डेटाबेस' निर्माण गर्न सहयोग गरिदिनुहुन हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौं। तपाईंहरुले [email protected] मा हामीलाई आफ्नो इमेल वा फोन नम्बर पठाउन सक्नुहुनेछ।
सेयर बजारको तनाव
विजय घिमिरे - सेयर बजारमा आएको पैसाको स्रोत खोज्न सम्बन्धित निकायले समिति बनाउन, धितोपत्र बोर्डले साना लगानीकर्तालाई सचेत हुन आग्रह गर्दा बजार घटेको आरोप छ । बैंकमा १० लाखभन्दा बढी बचत गर्दा स्रोत खुलाउनु पर्छ । बैंकले पनि यस्ता खाता धनीको विवरण नियमित रुपमा राष्ट्र बैंकमा पठाउँछन् । यो केही वर्ष पहिले देखिकै व्यवस्था हो । सेयर बजारमा पैसा कहाँबाट आइरहेको छ, यो हेर्नु हुदैन भन्ने होइन । सेयर बजारमा लगानी भएको पैसा कहाँबाट आएको हो, कस्तो प्रकृत्तिको हो यो हेर्न भनेर नै नियम बनेका हुन् । अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी र सुचारु गर्न यो आवश्यक पर्छ । सचेत गराउने काम पनि नियमन निकाय हो । राम्रोसँग वुझेर, कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेरेर लगानी गर भनेर भन्नु नियम निकायको दायित्व भित्रै पर्छ ।